Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ?
Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 5:24 AM Tutorial, နည်းလမ်းများ
Social Media ပေါ်မှာ Post တွေတင်ကြတာကအချိန်တိုင်းနီးပါးမှာတော့ တင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့Post တွေကို တင်ချင်တဲ့အချိန်မှာတင်တာထက်၊ ဘယ် Social Network တွေကဘယ်အချိန်တွေမှာတင်ရင် သာမန်အချိန်ထက် Reach, Engagement တွေပိုရတတ်လဲဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီတော့ Post တွေကိုဘယ် Social Network တွေမှာဘယ်အချိန်တင်ရင် Reach တွေ Engagement တွေ သာမန်အချိန်ထက်ပိုရတတ်လဲဆိုတာကို Infographic လေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်…
Facebook မှာဆိုရင် Post ကိုတစ်နေ့ကို တစ်ခါလောက်တင်ရင်လုံလောက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်တဲ့Post က နေ့လည် (၁) နာရီကနေ ညနေ (၄) အတွင်းလောက်ဆိုရင် သာမန်အချိန်တွေထက်ပိုပြီး ရလဒ်ကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။
Twitter မှာကတော့ တစ်နေ့ကို (၁၅) ကြိမ်လောက် Tweet မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ Retweet ကိုတော့ အနည်းဆုံး (၇) ကြိမ်လောက်ပြန်လုပ်ပေးပါ။ Twitter မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Tweet တွေလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကိုတော့အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Pinterest မှာဆိုရင် တစ်နေ့ကို (၁၁) ကြိမ် လောက် Pins မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ အရင်နေ့တွေက Pins ခဲ့တာတွေကို (၅)ကြိမ် လောက် Repins ပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။ Pinterest မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Pins တွေလုပ်နိုင်မ လဲဆိုတာကိုတော့အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
LinkedIn ကတော့ Facebook လို တစ်နေ့မှာ တစ်ခါ Post တင်ရင်လုံလောက်ပါတယ်။ LinkedIn မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Post တွေတင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ယ်။
Google+ မှာတော့ တစ်နေ့ကို (၂) ကြိမ်လောက် Post တင်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ Google+ မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Post တွေတင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Instagram မှာဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို (၂) ကြိမ်လောက် Post တင်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ Instagram မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Post တွေတင်နိုင်မလဲဆို တာကိုတော့အောက်ပါပုံ တွင်ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:24 AM Rating:5Social Media ပေါ်မှာ Post တွေတင်ကြတာကအချိန်တိုင်းနီးပါးမှာတော့ တင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့Post တွေကို တင်ချင်တဲ့အချိန်မှာတင်တာထက်၊ ဘယ် Social N...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:24 AM
Click တချက်နှိပ်ရုံနဲ့ မိမိရဲ့ ပုံကို Animation ရုပ်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲ
VK Account ကို အပြင်း​စား Report ထုနည်း
ဖုန်းထဲ Ads မဝင်အောင်ပိတ်ထားပေးမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်